Ny Power of Experience Customer Experience & mdash; Fampiharana mivantana amin'ny Semalt
Ny tranonkala na ny orinasa goavana dia mikasika ny teknolojian'olom-barotra. Ny ankamaroan'ny e-varotra dia manatona lasibatra haka ireo mpanjifany amin'ny tranonkala. Vokatr'izany dia manakarama ireo tolotra tambajotra dizitaly toy ny marketing medikaly, Social Media Marketing (SMM), miverimberina sy ny Search Engine Optimization (SEO). Ny ankamaroan'ny mpivarotra manana sehatra an-tserasera dia afaka mampiasa ny iray amin'ireto teknika ireto mba hahazoana tombony amin'ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa aterineto. Ity toe-javatra ity dia manazava ny antony mahatonga ireo mpamorona vohikala maro manao fanandramana maro mba hahazoana mpanjifa iray momba ny fomba fahatsiarovan-dry zareo ilay tranonkala.
Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Success of Semalt , mizara ny fomba fijeriny matihanina momba ny maha-zava-dehibe ny fanandramana ny mpanjifa amin'ny tanjona mba hahombiazan'ny fivarotana - computer in rent.
Google dia nanao ny fanavaozana ny algorithm tamin'ity taona ity. Ny sasantsasany amin'ireo sandan-kevitra noraisin'izy ireo dia ahitàna ny maha-zava-dehibe ny votoatiny, ny fikasan'ny mpampiasa, ny fahatsaram-pon'ny finday ary ny fampidirana ireo sary momba ny sary toy ny horonan-tsary. Ny traikefan'ny mpampiasa no fototry ny fomba fitsaboana amin'ny aterineto. Ny marketing dia mampifandray ny elanelana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Ny fanamafisana orina ny mpiasanao amin'ny sasantsasany amin'ny fitaovana sy ny fahalalana momba ny marketing ara-nomerika dia mety hitondra vokatra tsara eo amin'ny votoatin'ny tranonkala iray mitarika ny fanapahan-kevitry ny mpividy.
Tombontsoa ho an'ny tenanao manokana
Ny personalization dia afaka manampy ny orinasa hijanona eo amin'ny toeran'ny mpifaninana ao amin'ny fonosanao. Ireo mpitsidika tranonkala iray dia mandeha mankany raha toa ka tsara na ratsy ny serivisy. Izany toe-javatra izany dia midika fa ny fahafantaranao ny mombamomba anao manokana sy manome dokam-barotra sy votoatiny, izay manan-danja amin'ny fahalalahany dia ahafahan'ny tranonkalanao hanana tombony ankoatra ny atin'ny tranokala hafa. Amin'ny lafiny iray hafa, ity fitadiavan-tsarimihetsika ity dia ahitàna toro-hevitra mahasoa izay afaka mampifandray ny mpampiasa am-pifaliana amin'ny marika izay amporisihanao. Vokatr'izany, misy antony maro mahatonga ny fampahalalam-baovao manokana hahasoa ny tranokalanao.
Ny orinasa dia manatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny personalization. Ity teknika ity dia afaka manamboatra orinasa maro mpanjifa izay mamadika ny volany lava ary manao vola betsaka amin'ny mpanjifa ao amin'ny tranonkala. Tahaka ny fifandraisana madio, ny mpanjifa dia misafidy ny hifikitra amin'ny orinasa izay miezaka ny manao hetsika mba hahatongavana amin'izany. Tsy maintsy mamboly ny lazany amin'ny orinasa izy ireo mba hahafahany mampitombo ny habetsaky ny varotra ary manatsara ny tsy fivadihana amin'ny mpanjifa.
Ny fitsikerana sy ny metika dia manakiana
Ny data dia tena zava-dehibe amin'ny fanangonana vaovao ho an'ny orinasa. Rehefa manamboatra tranonkala iray dia zava-dehibe ny mampiditra fomba iray ao amin'ny famolavolana izay afaka manangona angona sarobidy ho an'ny tranokalanao. Vokatr'izany, afaka mahita fomba fijery manan-danja ny maodim-piteny mba hanaraka akaiky ny mpanjifany. Amin'ny sehatra hafa dia mandefa mailaka sy teknolojia SEO hafa ny mpampiasa handray ny mailaka manokana. Ny mailaka ankapobeny dia mamono ny moraly misy ny mpanjifa ary manosika azy ireo hivoatra amin'ny fampiasana tranonkala manokana.
Ampianaro ny mpiasa hanolotra tolotra tsara indrindra
Tokony hanomana ny ekipan'ny varotra ianao amin'ny andraikiny amin'ny fanomezana ny mpanjifa tsara indrindra. Raha misy olona mampitombo ny fahaliananao amin'ny dokam-barinao ary manindry rohy mankany amin'ny tranonkalanao, te-hividy izy ireo. Ny fivoarana izany tombontsoa izany amin'ny hetsika iray dia tena ilaina. Ity vokatra ity dia mitaky ny fahombiazan'ny mpanjifa noho ny famonoana azy.